Miteraka Fandraràna ny 3G Ao Kambodza Ny Fahatahorana Sary Vetaveta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 6:18 GMT
Ny tambajotra 3G voaomana dia mampiseho laza tsy mitsahatra mitombo ananan'ny fahafahana mampiasa ireo finday ao Kambodza. Kanefa, ao anatin'ny ezaka ho fanatsarana ny fitondrantena ara-tsosialy, nanapaka hevitra ny Praiminisitra ao Kambodza ny hanakana ilay teknolojia farany tamin'ny fitanisàna ireo voka-dratsin'io teknolojia io. Manolotra hafainganam-pandeha avo be ho fampitàna angona ireo tambajotra 3G, hahafahan'ireo mpampiasa mandefa ireo sary sy ireo ampahana lahatsary haingana kokoa noho ireo tambajotranà finday mahazatra.
Lahatsoratra vitsivitsy tao anatin'ireo gazety eo an-toerana sy ireo media vahiny vaventy mikasika ny finday 3G ao Kambodza no hita ho nibahan-toerana tamin'ireo lohateny vaventy tao amin'io firenena Azia Atsimo-Atsinanana io. Ary mety ho tazana tao anatin'ny tontolom-bolongana Kambodziana sy tany amin'ny faritra ihany koa ny adihevitra.
Nanoratra toy izao ny Weblogger Tam Hanna
“Tsy dia tena mampihomehy velively an'ireo Kambodziana loatra io, fa izahay ety an-jorony kosa angamba mety hitsikanikany tsara.”
Notsindrian'ny Cambodia Blog ny ampahana vaovao mahaliana sy ny trangana fandefasana sary vetaveta tamin'ny taona lasa izay nahitana sarina mpilalao sarimihetsika iray miboridana niparitaka toy ny viriosy tamin'ny solosaina tao amin'ny firenena.
Mahagaga, toa miatrika sakantsakana avy any anivon'ny vadin'ireo mpitarika Kambodziana ilay tolotra lahatsary amin'ny finday 3G. Ny Vadin'ny Praiminisitra Hun Sen, Ny Praiminisitra Lefitra Sok An, ary ny Printsilahy Norodom Ranariddh; sy ireo enina hafa, nanao sonia ny fitarainana tamin'ny Zoma hoe ny andiany fahatelo na ireo tolotra 3G “dia hitondra vokatra ratsy ara-moraly sy ara-tsosialy. Mitatitra ny The Cambodia Daily. Niantso ny fanangonan-tsonia ho toy ny tsy misy heviny ny solontenan'ny AZ.
Maka ho ohatra ny tranga niseho tamin'ny taona 2005 ilay fanangonan-tsonia, fony nampiasaina ireo hafatra tamin'ny finday mba handefasana sary vetaveta sy sarina mpilalao sarimihetsika iray.
Ary nandefa andalanteny vitsivitsy mahaliana avy amin'ny tsanganan-dahatsoratra an-gazety i Vutha, blaogera eo an-toerana.
“Andriamatoa Dya Rith monina ao Phnom Penh nilaza fa toy ny antsy ny 3G. Tsy mitera-doza ny Antsy rehefa ampiasaina ao an-dakozia hitetehana legioma. Saingy lozabe kosa izy rehefa ampiasaina handratrana sy hamonoana olona.”
Tsotra fotsiny no hevitr'i Langkasuka hoe:
“Izao tontolo izao ve, na fara-fahakeliny any Azia Atsimo-Atsinanana, dia anatin'ny tazona FANDRARàNA?”
Any Singaporo, raràna tsy hijery Da Vinci Code ireo ankizy latsaky ny 16 taona satria heverin'ireo ‘gahmen’ any fa ny sarimihetsika no hinoan'ireo ankizy kokoa fa tsy ny mpampianatra sekoly alahady azy. Any Bolehland, ny sarimihetsika tsy miankina “Lelakin Komunis Terakhir” (Ilay Kaominista Farany) dia voaràra noho ny lohateny saropady hoe lah tu! Ankehitriny, manatevina laharana io hetsika io ny Praiminisitra ao Kambodza.”